Waa been Dadqalatooyin ayaa ka baxay Calmadow | allsanaag
Argagixisada Alshabaab iyo taageerayaashooda SNM ee ku sugan Buuraha calmadow, kuma iman buuraha Calmadow Casumaad loo fidiyey iyo marti qaad loo sameeyey. Waxay halkaa ku joogaan waa dhul ay xoog ku haystaan oo ay aaminsan yihiin inay Qori caaradiis ay ku joogaan. Dadkii lahaana ay ka itaal roonaadeen. Waxayna uga bixi karaan oo qura waa awood la tuso iyo in dagaal looga saaro.
Hadaba wararkan sheegaya in alshabaab badan ay buuraha Calmadow ka baxeen, waa marin habaabin , waa been cad , waxaana lagu qarinayaa waa alshabaabka soo socda oo la doonayo in la geliyo Buuraha Calmadow . Ujeedadda laga leeyahayna waa in Bulshada degaanku ay foojignaan badan siiyaan oo qura , alshabaab aan jirin OO si iskood ah uga soo baxaya buuraha Calmadow, oo ayna marna xuduudahooda ka ilaashan dadka soo gelaya oo u gudbaya degaanadooda iyo Puntlandba.
Wararkan ah in alshabaab ka baxeen buuraha Calmadow, wa sheeko ay fidiyeen siyiaasiyiin ka soo jeeda beesha Isaaq, si ay bulshada u jaahwareerinayaan iyaga oo dano dhulbalaarsi ah leh . waxaana hormuud ka ah dacaayadahan raqiiska ah ninka sirdoonka SNM wakiilka uga ah magaalada Ceerigaabo ee lagu magcaabo Ismaaciil Xaaji Nuur.
Ugu danbayntii Alshabaab Buuraha Calmadow ka bixi maayaan inta Ismaaciil XaaJI Nuur iyo kooxdiisu ay ku riyoonayaan inay dhulbalaarsi ku samayn karaan gobolka Sanaag. Reer Maakhirna Alshabaab Buuraha Calmadow kama saari karaan ilaa ay alshabaab ugu tagaan guriga uu ka soo kaco ee Xaafadda Dayacan ee magaalada Ceerigaabo . Xasilinta magaalada Ceerigaabo iyo xoraynta alshabaab waa labo isku xiran oo u baahn in mar la wada qaado. Sideetameeyadii Duulaankii SNM ee Ismaaciil xaaji nuur hogaamin jiray waa ka joogsan waayey gobolka Sanaag sida maanta oo kale, ilaa ay reer Maakhir ugu tageen SNM Ceel afweyn iyo duleedka Burco. Maalintaas, maalin ka danbaysay lama arga Isaaq sooc ah oo soo weeraray Maakhir, aan ka ahayn Marrabi ay samaysteen oo ay hadda adeegsadaan oo marna Alshabaab Calmadow soo geliya marna Wrqado codayn ah wada
← Koonfur galbeed ma Alshabaab iyo Mooshin ayaa loo dhisay? Wasiirka Amniga oo afur u sameeyay Xildhibaanada Labada Gole ee Beesha Mudullood →